Home Wararka Gudaha Deni iyo Karaash oo kulan gaar ah yeeshay kadib khilaaf soo kala...
Deni iyo Karaash oo kulan gaar ah yeeshay kadib khilaaf soo kala dhexgalay.!
Madaxweynaha Puntland iyo kuxigeenkiisa oo kulan gaar ah yeeshay kadib khilaaf soo kala dhexgalay.!
Xogo dheeriya ayaa kasoo baxaya kulan ay labada masuul ee ugu sarreeya Puntland Madaxweyne Siciid Deni iyo kuxigeenkiisa Axmed Karaash ku yeesheen xarunta madaxtooyada caasimadda Garoowe.
Kulanka oo muddo saacado ah qaatay ayaa labada dhinac aad uga doodeen waxyaabaha la isku hayo ee khilaafka abuurey iyo sidii looga gudbi-lahaa xal waarana loogu heli-lahaa arrimaha noocaan ah ee soo noqnoqdey.
Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni oo kulanku dhinaciisa ka yimi ayaa kuxigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash hordhigey in khilaafkooda ay hoos udhameystaan oo aan cidkale soo dhexgalin, inta badan Axmed Karaash ayaana soo dhaweeyay arrinkaas.
Gabagebadii kulanka oo kusoo dhamaadey is-afgarad ayaa loo balamay is-arrag dambe oo lagu dhameystirayo xal waara oo dhinacyadu wada-gaaraan si meesha looga saaro khilaafka soo noqnoqdey ee u dhaxeeya Madaxweyne Deni iyo Kuxigeenkisa Karaash.
Previous articleDEGDE Kooxo hubaysan goordhaw ku dishay Gudoomiyihii xisbiga Ucid Maxamed Aflahaar Laascaanood.
Next articleWasiirro ka tirsan Jubaland oo howlo shaqo u jooga Dhoobley ayaa
Xaaladda degaanka Bacda oo deggan iyo Saraakiisha ciidanka Macawiisleeyda oo soo...
Maxamed Bin Salmaan oo booqasho deg deg ah ku tagaya dalka...
Xog: Sidee Rooble uga war helay qorshaha guddiga FEIT kahor inta...